Computer Optical Drive Device iberibe nkọwa nke zuru Description gụnyere esịtidem na mpụga | | OS-ụlọ ahịa Blog
June 17, 2019 ecommerce Computer, Electronics, OS-ụlọ ahịa, OSGEAR Support, ngwaahịa, nchekwa, Technology 0
The kasị mkpa echiche mgbe ị na-ahọrọ ihe ngwa anya mbanye (CD, DVD, Blu-ray) bụ ụdị nke discs na a ga-eji na mbanye nakwa dị ka ọrụ mbanye ga-eme.
The etozu Format>>>
-ROM: Ikenchèta keọgụgụ naanị. Ị ike dee ka a -Rom diski, nke hapụ ụlọ ọrụ na data ugbua na ya. A -Rom drive nwere ike ịgụ discs ma dee ha, na ọ dịghị uru ọ bụla maka a oghere diski.
-R: Recordable. Ị nwere ike ide na otu n'ime ndị a discs ozugbo (bụrụhaala na i nwere ihe -R mbanye). Ma mgbe ị na-mere, ọ bụ n'ụzọ dị irè a -Rom diski.
-RW: Rewritable. Ọzọ nzuzu acronym, na mgbe nile na-atụ aro “ịgụ na ide” m. Ị nwere ike ide ndị a discs, ichicha ha, na ide ha ọzọ.
-RE: Recordable Erasable. The Blu-ray mgbanwe nke -RW, na a nnọọ ihe ezi uche dị na acronym.
ọkụ: Dee na a diski. Ọ na-akpọ ọkụ n'ihi na ọ mere na a laser, bụghị a pen.
DVD + R; +RW; ± R, ± RW: E nwere ihe abụọ ụkpụrụ recordable na rewritable DVD: DVD-R na DVD + R, onye ọ bụla na ya Ẹkot RW mgbanwe, ma onye ọ bụla nke chọrọ ka ya ụdị mbanye na oghere diski. The ± ịrịba ama, nke ị ga naanị chọta na draịva, agwa gị na mbanye nwere ike ire ma – na +. Fọrọ nke nta niile mere ụbọchị ndị a na ±, na-eme ihe dị iche n'etiti + R na -R adịghị mkpa.
DL: Dual Layer. Nke a okpukpu abụọ ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta okpukpu abụọ ike nke DVD na BDs. Ọ bụla DVD ma ọ bụ Blu-ray drive nwere ike ịgụ DL discs.
Mbanye Type na Ọrụ >>>
CD-ROM draịva na-agụ-na CD-DA (audio) discs, CD-ROM (data) discs, na (emekarị) CD-R / CD-RW writable discs.
The ndọghachi azụ nke a CD-ROM mbanye bụ na ọ nwere ike na-agụ DVD-Video, DVD-Audio, ma ọ bụ DVD-ROM discs na na ọ nwere ike ọ bụghị dee discs.
Dị ka CD-ROM draịva, DVD-ROM draịva agụ CD-DA, CD-ROM, na CD-R / RW discs, ma ha na-agụ DVD-Video, DVD-ROM, na (mgbe ụfọdụ) DVD-Audio discs.
DVD-ROM draịva na-agụ-na-na ngwaọrụ, na ike dee discs.
CD-RW draịva, na-akpọ CD dere, CD burners, ma ọ bụ CD ndekọ. CD dere na-agụ otu formats dị ka CD-ROM draịva CD-DA, CD-ROM, na CD-R / RW discs ma nwekwara ike dee data ka ọnụ CD-R (dee-ozugbo) na CD-RW (rewritable) discs.
DVD ngwakọta mbanye
Nke a mbanye nwere ike ịgụ CD-RW na DVD-RAM, ma ọ bụ naanị nwere ike ire CD-RW bụghị DVD-RW
Blu-Ray ngwakọta mbanye (BD-ROM)
Blu-ray player na-arụ Blu-ray, DVD, na CD. Ọ na-akwado 3D(mgbe eji na 3D njikere software na ngwaike). Biko mara na mbanye anaghị dee / ọkụ Blu-ray ma ga-egwu Blu-ray na ịgụ na ide DVD na CD.
Blu-ray burner mbanye
Mbanye akwado BDXL format. BDXL akwado 128GB Quad Layer na 100GB Triple Layer Blu-ray media. Ọ nwere ike na-agụ BD-ROM discs, na-agụ / dee na otu, sọrọ, Mmaji, na quad-oyi akwa BD-R discs. The mpụga edemede bụ backward dakọtara na ịgụ na ide na DVD na CD formats.
Olee otú m na-ahọrọ SATA ma ọ bụ ide Device>>>
The Optical Njìàrụọrụ mbanye na jikọọ na motherboard via ihe interface USB.
SATA anọchi Serial Advanced Technology ekekọta (ma ọ bụ Serial ATA) na ide na-akpọ Parallel ATA ma ọ bụ PATA. SATA bụ ọhụrụ ọkọlọtọ na SATA draịva na ngwa ngwa karịa PATA (HERE) draịva. SCSI (Obere Computer System Interface) nke a na-bụ-eji na ndị ụlọ ọrụ.
Ị mkpa ka anya na kọmputa gị motherboard ma ọ bụ anya na gị motherboard ntuziaka na-ekpebi ma ọ bụrụ na ọ na e dere na ndị okenye ide Njikọ ma ọ bụ ndị ọhụrụ SATA njikọta. The motherboard pụrụ ọbụna nwere ma ụdị nke njikọ.
Desktop na Akwụkwọ ịde kọmputa nwere ihe abụọ ngwa anya disk draịva itinye usoro.
Tree-loading usoro maka ngwa anya draịva desktọpụ kọmputa agbasaghị inwe kama keukwu.
maka laptọọpụ, na tree-loading usoro dị nnọọ obere.
Tree Ibu Ibu mbanye – Na a tree-loading usoro, diski-etinye na na a motorized tree, nke na-akpali na nke na kọmputa.
Oghere Ibu Ibu mbanye – na a oghere-loading usoro, diski na-adara a oghere na motorized rollers n'ime mbanye na-eji ime ka diski na ya.
Optical Drive Standard Elu>>>
Na a na desktọọpụ kọmputa, na Optical mbanye na-abịa na a ọkọlọtọ 5.25-anụ ọhịa ụdị ihe na-akpata.
Laptọọpụ nwere ebughibu ọkọlọtọ esịtidem drive ngwaọrụ size: 12.7mm na 9.5mm
Lee ndị isi malite izi ndị nkịtị ngwa anya mbanye.
N'ihi na n'ihu ozi ọzọ, biko pịa ebe a.
Olee otú idozi Optical Drive wụnye ma ọ bụ chọta na Windows
Olee iwepụ ụda Optical Drive iberibe Safely
Gịnị nwere ike iji USB 3.0 Ngwaọrụ na otú melite ??
ngwa anya mbanye
Ekwentị mkpanaka iwu nkọwa Public Nzube 64-bit Windows Technology_Internet Series Driver Support software Intel HD Graphics HTC Samsung processor OS-ụlọ ahịa ihe Njikwa Ngwaọrụ CPU ngwaọrụ Model Technology processors ọkwọ ụgbọala nkwado Nokia
OS-ụlọ ahịa Ekwentị mkpanaka Sony Ericsson processors Public Nzube processor Intel Server Intel Series Driver Support ngwaọrụ Model HD Graphics HTC CPU ihe Njikwa Ngwaọrụ 64-bit Windows Technology Nokia Samsung Samsung Galaxy iwu nkọwa Technology_Internet smartphones software Qualcomm ọkwọ ụgbọala nkwado